स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजनीति : भाइरस विशेषज्ञसहितका डाक्टरलाई मन्त्रालय तानेर कामविहीन बनाइयो – HostKhabar ::
समायोजन नमिलेका तीन सय स्वास्थ्यकर्मी सम्पर्कविहीन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई काम नदिएर नयाँ दुई सय ५६ कर्मचारी भर्ना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञापन, तर न्यून आवेदन !
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर गरेर मात्र फर्किन्छन् यी कर्मचारी जसको बस्ने कुर्सी छैन, गर्ने काम छैन !
काठमाडौं : कोरोना संक्रमितको उपचारमा जनशक्ति अभाव भएको भन्दै सरकारले डाक्टर, नर्ससहित दुई सय ५६ स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना गर्न विज्ञापन गरेको छ । तर, अपेक्षाअनुसार आवेदन नपरेको भन्दै चिन्ता जनाइरहेको छ । दुर्भाग्य, हाजिर मात्रै गरेर तलब खाइरहेका विशेषज्ञ चिकित्सकसहित पाँच सय स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा खटाउनेतर्फ भने सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमै विशेषज्ञ चिकित्सकसहित २२ स्वास्थ्यकर्मी फाजिलमा छन् । विशेषज्ञतर्फ एघारौँ तहका महमद दाउद र राधिका थपलिया तथा दशौँ तहका डा। पवनकुमार शाह र डा। श्रवणकुमार मिश्र हाजिर मात्रै गर्छन् । त्यस्तै, नवौँ तहका डा। प्रज्ज्वल श्रेष्ठ, डा। नीलम ठाकुर, डा। रवीन्द्र रेग्मी, डा। सुमित अग्रवाल र डा। सन्ध्या जोशीले मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने र वीर अस्पतालमा काम गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले फाजिलका तीन सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी सम्पर्कबाहिर रहेको बताए । करिब दुई सयलाई भने देशभरका हेल्प डेस्कमा परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्पर्कबाहिर रहेकाहरू चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ तहका छन् । जब कि विभागले पनि यी तहका समेत ७८ स्वास्थ्यकर्मी माग गर्दै ११ चैतमा विज्ञापन आह्वान गरेको छ । नवौँ तह एनेस्थेसियोलोजिस्ट चारजना, नवौँ तह चिकित्सक ९एमडी क्रिटिकल केयररएमडी इन्टरनल मेडिसिन० चारजना, आठौँ तह मेडिकल अधिकृत १६ जना, सातौँ तह नर्सिङ अधिकृत चारजना र पाँचौँ तह स्टाफ नर्स ५० जना मागेको छ । विभागले सात दिनको म्याद दिएकोमा हालसम्म नगन्य आवेदन परेको छ । ‘अपेक्षाअनुसार दरर्खास्त आएको छैन,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘यो वेला दर्खास्त दिनुपर्ने थियो, तर दिएनन् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारीले भने, ‘सेवासुविधा लिएका प्रशासनका कर्मचारी घरमा बसेका छन्, तर हामी हिँडेर काममा आउनुपरेको छ ।’ स्वास्थ्यमा ६ जना प्रशासनका उपसचिव रहेकोमा सबै अनुपस्थित छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवातर्फ प्रमुख विशेषज्ञ डा। रोशन पोखरेल, डा। दीपेन्द्ररमण सिंह, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटा, डा। गुणराज लोहनी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भीम सापकोटा, सागर दाहाल, जनस्वास्थ्य अधिकृत यशोदा अर्याल, डा। गुणनिधि शर्मा, रविकान्त मिश्र र पानबहानुर श्रेत्री काममा छन् ।
टेकु प्रयोगशालाबाट यही वेला मन्त्रालय तानिएका भाइरसविज्ञ डा। श्रवणकुमार मिश्र भन्छन्–
मलाई एक सातादेखि मन्त्रालय तानिएको छ, किन र केका लागि तानियो थाहा छैन, कतैबाट जवाफ पाएको पनि छैन, देश संकटमा परेको वेला म जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार छु तर काम पाएको छैन
२८ असोज ०७५ मा सचिव डा। पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनमा अस्थिरता सुरु भएको हो । सरकारले मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका केदारबहादुर अधिकारीलाई मंसिर १७ गते स्वास्थ्यसचिवका रूपमा सरुवा गरेको थियो । माघ ३ मा अधिकारीलाई पनि स्वास्थ्यबाट सरुवा गरेर सरकारले अर्का सचिव चन्द्र घिमिरेलाई स्वास्थ्यमा पठाएको थियो । सरकारले घिमिरेलाई पनि वैशाख २ मा स्वास्थ्यबाट सरुवा ग¥यो । उनको ठाउँमा कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव रहेका रामप्रसाद थपलियालाई पठाइएको थियो । ९ भदौमा स्वास्थ्यसचिवका रूपमा रहेका रामप्रसाद थपलियालाई हटाएर शिक्षासचिव रहेका खगराज बराललाई स्वास्थ्यसचिवमा सरुवा गरिएको थियो । उनको पनि सरुवा भएको छ ।
सरकारले टेकुसँगै पाटन र सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा पनि कोरोना शंकास्पदको जाँच र संक्रमण देखिए उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी बिरामी परे अस्पतालनजिकैको होटेल वा साना अस्पताल खाली गराएर राख्ने व्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता देवकोटाले बताए । सरकारले हरेक अस्पताललाई पाँच सेट पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट ९पिपिई० दिएको छ ।
६ बुँदे परीक्षण मापदण्ड तयार
सरकारले कोरोना शंकास्पदको परीक्षणका लागि ६बुँदे मापदण्ड बनाएको छ । जथाभावी पिपिई माग भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको हो । नमुना लिने व्यक्तिले एन ९५ मास्क, चस्मा, पन्जा, गाउन र क्याप लगाउनुपर्नेछ । ज्वरो आएका बिरामी जाँच्दा सर्जिकल मास्क, चस्मा, पन्जा, पानी छेक्ने गाउन र क्याप लगाउनुपर्नेछ । स्क्रिनिङ टेस्ट गर्दा एक मिटरभन्दा नजिक भए मात्रै मास्क लगाउने नत्र आवश्यक नहुने मापदण्ड बनाइएको छ । एम्बुलेन्सचालकले सर्जिकल मास्क र पन्जा लगाउनुपर्नेछ । प्रयोगशालामा परीक्षण कार्यमा संलग्न हुनेहरूले सर्जिकल मास्क, चस्मा, पन्जा, गाउन र क्याप प्रयोग गर्नुपर्नेछ । कोरोना प्रभावित अस्पतालमा काम गर्ने अन्य स्वास्थ्यकर्मीले कुनै पनि प्रकारको पिपिई लगाउनुपर्ने छैन ।